सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन सम्पन्न: नौ सय व्यावसायीले गरेनन् मतदान
धरान । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन सोमबार तामझामका साथ सुरु भयो । सबै उम्मे दवारका ब्यानर संघको कार्यालय आसपासमा देखिए । आम निर्वाचनलाई समेत उछिन्ने गरी जस्तो देखिएको निर्वाचनमा मतदान नगर्ने व्यावसायीको सङ्ख्या समेत उल्लेखीय पाइयो । सुनसरी जिल्लालाई समेट्ने गरी २०१९ सालमा व्यापार प्रबन्ध समितिका नाममा गठन भएको संघ सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका नाममा २०२० सालमा दर्ता भयो । यसबीचमा जिल्ला भरिका उल्लेखीय उद्योगी व्यावसायी संघको मातहत बाहिर छन् । संघमा आबद्ध भएर पनि नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या पनि उल्ले खीय छ भने नवीकरण गरेर पनि मतदानमा नौ सय उद्योगी व्यावसायी सहभागी भएनन् । निर्वाचनमा उद्योगी
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको बढ्दो सरगर्मी: झल्को आमनिर्वाचनको
धरान । सुनसरी उद्योग वाणिज्य सघको निर्वाचन नकिजिदै जाँदा आफ्ना एजेण्डा बोकेर प्रत्यासीहरु घरदैलोमा व्यस्त रहेका छन् । असार २० गते निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनीहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै मतादाता तान्न अभियानमा जुटेका हुन् । अध्यक्षका पदका लागि हालका प्रथम उपाध्यक्ष शिवराज श्रेष्ठ, निवर्तमान उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष पवन अग्रवालले उम्मेदवारी दिएका छन् । शिवराज श्रेष्ठले कोशी निर्माण सेवा फर्मको नाममा, विजय श्रेष्ठले एकता निर्माण सेवा र पवनकुमार अग्रवालले गर्ग इम्पेक्सको फर्मबाट उमेद्वारी दर्ता गराएका हुन् । शिवराज श्रेष्ठ र विजय श
स्थानीय भवन निर्माण व्यवसायी संघको समर्थन शिवराज श्रेष्ठलाई
धरान । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जित सुनिश्चितताका लागि उम्मेदवारहरुको भेटघाट र दौडधूप तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । शुक्रबार गठबन्धनका तर्फका उम्मेदवार शिवराज श्रेष्ठले धरान ८ का व्यवसायीलाई घरदैलो कार्यक्रम मार्फत आफ्नो प्यानलमा मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । वडा नम्बर ८ र ९ का बजार क्षेत्रमा उम्मेदवार श्रेष्ठले मतदाता समक्ष पुगेर मतदान गर्न आग्रह गरे । शुक्रबार साझ नै स्थानीय भवन निर्माण व्यवसायी संघ सम्बद्ध व्यावसायीहरुसग उम्मेदवार श्रेष्ठले अन्तर्कृया गरे । भेटघाटमा एजेण्डा र नेतृत्वका हिसाबले पनि उम्मेदवार श्रेष्ठ सक्षम रहेको व्यावसायीहरुले धारणा राखे । स
उद्योग वाणिज्य संघमा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्यो : अध्यक्षमै तीनजनाको उम्मेद्वारी, चारजना सदस्य निर्विरोध
धरान । सुनसरीका उद्योगी, व्यवसायीहरुको छाता संगठन सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनलाई व्यापारी व्यवसायीहरुले महत्वका साथ हेर्ने गरेका छन् । यो निर्वाचिनलाई व्यवसायीहरुले स्थानीय निर्वाचन जत्तिकै महत्वका साथ हेर्ने गर्छन् । व्यापारी व्यवासायीको हक अधिकार तथा व्यवसायिक सुनिश्चता प्रदान गर्ने नेतृत्व छान्ने भएकोले पनि यो निर्वाचनलाई सुनसरीका उद्योगी, व्यवसायीहरुले महत्वपूर्ण रुपमा हेर्ने गरेका हुन् । उद्योगी, व्यवसायीहरुको हकहित र व्यवसायिक सुरक्षाको दायित्व बोकेको कारण उनीहरुले यो निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेर्ने गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि वि.सं. २०१९ सालमा तत्
धरान । रंगेली नगरपालिका ले आर्थिक बर्ष २०७९÷२०८० को लागी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार छैठौ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षको लागी बजेट सार्वजनिक तथा पारित गरेको हो । पालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमानित ८८ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ७८ को बजेट प्रस्तुत गरेको हो । नगरपालिकाकी उप्रमुख भूमा पराजुलीले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक बर्षको विनियोजित बजेट रु २५ करोडौं ४१ लाख ५३ हजार १ सय एकतीस रुपैयाँ, पुजीगततर्फ करोड ३९ करोडौं ६८ लाख ५२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ , राजस्व संकलन तर्फ ३ करोडौं १५ लाख गरी ८८ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ७८ आय हुने अनुमान गरेको छु । आन्तरिक आयवाट रु ४ करोड ३५ लाख ७
सवै पालिकाको बजेट सार्वजनिक: प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि
धरान । इलाम नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को लागि एक अर्व २२ करोड ३७ लाखको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । इलाम नगरपालिकाको ११ औ नगर सभामा उपप्रमुख विश्नुमाया दहाल लिम्बुले पेस गरेको बजेट पारित भएको शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । नगर सभाले आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को लागि रु १ अर्व २२ करोड ३७ लाखको आयव्यय अनुमान गरेको छ । आन्तरिक स्रोतमा २० करोड ४९ लाख ८९ हजार १ सय ६०, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ८४ करोड २८ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ४ करोड २८ लाख ४ हजार र राजश्व बाँडफाँडबाट १३ करोड ३१ लाख ६ हजार ८ सय ४० रहेको छ । व्ययतर्पm कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ १६ करोड
विराटनगरको आर्थिक विधेयक त्रुटिपूर्ण – उद्योगी
धरान । नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०७९/०८० व्यवसायीको हितमा नरहेको त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै विराटनगरका उद्योगीहरु आन्दोलित बनेका छन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ तथा ट्रेड युनियन र श्रमिकहरुले विराटनगर धरान सडकखण्डमा रहेको गोकुवा चौकी बासबारमा वृहत विरोध प्रदर्शन गरेको छन् । जि.आई. वायर, वनस्पति ध्यूतेल, सेनिटरी प्याड आदि विभिन्न उद्योगहरुका लागि ल्याएका व्यवस्थाहरु त्रुटिपूर्ण रहेको भए पनि केही समय अगाडि उद्यागीहरुले नेपाल सकारका अर्थमन्त्रीू र अर्थ सचिवले मोरग व्यापार संघ सहित उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं. १, ट्रेड युन